Global Voices Miasa Miaraka Amin’ny Fundación MEPI · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Novambra 2013 22:29 GMT
Nandroso ho amin'ny fiaraha-miasa vaovao amin'ny Fundación MEPI, fikambanana mampiroborobo ny tetikasam-paritry ny fanaovan-gazety mpanao famotorana ao amin'ny faritry ny kaontinanta Amerika ny Global Voices.
Najoro tamin'ny taona 201O tao Meksika ny MEPI, toerana izay tankin'ny tsy fananana loharanom-bola ireo sehatry ny famoaham-baovao sy ny fanafihana (famonoana) mpanao gazety ny fanaovan-gazety fanadihadiana amin'ny endrika famotorana. Ho setrin'ireo fanamby ireo, tian'ny MEPI ny hampiroborobo ny fahalalahan'ny fanaovan-gazety sy ny fanohanana “ny fampandrosoana ireo taranaka hoavin'ny mpanangom-baovao ao Meksika sy Amerika Afovoany.”
Taoriandriana ny habaky ny MEPI nanazava bebe kokoa:
Tian'ny mpamaky ho azony ny tena fomba fiasan'ny governemanta, ny mpiantsehatra fanta-bahoaka [ny manampahefana] ary ny sampan-draharaha maro. Ireny fanazavana antsipirihany ireny no manolotra ho an'ny olom-pirenena ny demaokrasia ahafahany manana ny faharanitana takiana ahafahany manao fanapahan-kevitra amim-pahalalàna hahazoana governemanta afaka sy marindrano. Saingy miakatra ny vidin'ny vaovao manana kalitao ary ifaninanana ihany koa, noho ny fampiasana ny teknolojia. Noho ny fanampian'ny mpanao fanomezana, mpanohana ary ny mpiara-miasa, dia naka ny andraikitra hamoaka valim-pamotorana avy amin'ny fampiasana ny teknolojia ao amin'ny faritra sy miampita sisintany ny Fundaciòn MEPI hamoahana ao amin'ny mazava ny fomba fanaovana kolikoly, hakingan-tanana (amin'ny fanodikodinana) ary ny tsimatimanota.
Amin'ny maha-anisan'ny iraka ampanaovana azy ireo, kinendrin'ny MEPI ny “handrohy tantara ao Etazonia, Meksika ary Amerika Afovoany sy ny hanampy fanazavana kokoa amin'ny mpamaky manerana ny gilaoby ny hetsika miampita firenena. Mifanaraka amin'ny iraky ny Global Voices “hanangana tetezana manavatsava ireo helodrano izay mampizarazara ny vahoaka, mba hifankahazoan'ny tsirairay feno kokoa” ny vinan'ny MEPI.
Hifanakalo votoaty tsy tapaka ny Global Voices sy ny Fundación MEPI. Indraindray izahay hampisaratsaraka ireo endrika lavan'ny famotorana ataon-dry zareo ho andian-dahatsoratra. Atombokay amin'ny alalan'ny lahatsoratra Ny fanjakazakan-dehilahy sy ny fomba fijery tranainy diso no mampangina ireo Meksikana lasibatry ny fanolanana hangina [mg] izay efa vonona ihany koa amin'ny teny Espaniola espaniola ity fiaraha-miasa ity.